Falanqayn: Yaa Awood U Leh In Uu Iska Xaadiriyo Finalka Ka Dhici Doona Cardiff Real Madrid Vs Atletico Madrid, Juventus Vs Monaco – Kooxda.com
Home 2017 April Champions League, France, Italy, Spain, Wararka Maanta, Warbixino Falanqayn: Yaa Awood U Leh In Uu Iska Xaadiriyo Finalka Ka Dhici Doona Cardiff Real Madrid Vs Atletico Madrid, Juventus Vs Monaco
Falanqayn: Yaa Awood U Leh In Uu Iska Xaadiriyo Finalka Ka Dhici Doona Cardiff Real Madrid Vs Atletico Madrid, Juventus Vs Monaco
April 21, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 4
Waxa Goordhawayd la sameeyay isku aadka wareega 4 dhamaadka tartanka champions league xilli ciyaareedkan iyada oo ay soo bexeen kulamo aad u xiiso badan aad loo sugayo.
Kooxaha Ka Dhisan Magaalada Madrid ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa mar kale ku kala calaf qaadi doona tartankan iyaga oo iska ciyaari doona markii 3-aad 4 sano gudohood.
Waxa kale oo isku dhacay labada kooxood ee xilli ciyaareedkan qaab ciyaareedka fiican ku jira tartankan ee kala ah Juventus iyo Monaco iyaga oo si aad u fiican u soo gaaray tartankan.
Hadaba waxa aanu warbixintan ku falanqayn doonaa labada kooxood ee nasiibka u yeelan doona in ay isku raacaan dalka Wales gaar ahaan caasimada Carddif si ay halkaas ugu kala qaadaan finalka champions league:
Taageerayaasha Kooxda Real Madrid ayaa ku rajo weynaa in ay kulnka lugta 1-aad ku ciyaaraan garoonkooda Estadio Santiago Bernabeu maadama ay doonayaan in ay kulanka garoonkooda lagu ciyaarayso kala baxaan guul ama bar-baro taas oo ka caawin karta in ay kulanka lugta 2-aad ugu yaraan hal gool dhalin karaan si ay xaalada ugu xumeeyaan kooxda Rojo Blancos.
Arinta kale ee ay taageerayaasha Real Madrid ugu rajo weyn yihiin kulankan ayaa ah in kooxda Real Madrid ka awood sarayso kooxda Atletico Marka ay noqoto champions league iyada oo ay cadayn kuu tahay in ay 2 final ka qaadeen 5 sano ee ugu dambaysay.
dhanka kale natiijada Derby-ga ayaa u janjeedhsantay dhanka Real Madrid tan iyo markii uu maamulka kooxda la wareegay Tababare Zidane isaga oo Atletico ka badiyay 3 kulan oo garoonka Real Madrid ah halka uu kulan kalena bar-baro la galay.
Arinta ugu dambaysa ee kooxda Real Madrid u sharaxaysa in ay u gudubto wareega finalka ayaa ah qaab ciyaareedka kooxda Atletico Madrid oo aan ahayn mid fiican xilli ciyaareedkan.
Waxa run ah in kooxda Atletico u taratamayso horyaalka iyo sidoo kale champions league laakiin marka qaar ayaad dareemaysaa in ay waayeen qayb ka mid ah awoodeedii xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay.
Arinta kaliya ee dhanka Atletico Madrid u leexin karta in ay finalka gaarto ayaa ah awooda jidh ahaaneed maadama ay kooxda Real Madrid kulamo aad u adag ciyaartay kulamadii ugu dambeeyay oo ay waliba u harsantahay kulanka El calsico halka ay kooxda Atletico martay imtixaano aad uga fudud kooxda Real Madrid hadii ay noqoto horyaalka iyo champions league.
Juventus Vs Monaco:
Fikir ahaantayda kooxda Juventus ayaan wax dhibaato ah ka wajihin kooxaha leh weerarka halista ah maadama ay daafaca dambe ku leedahay xiddigo bir ah oo aan si dhib yar lagu dhaafi karin.
Waxa aynu aragnay sidii ay ugu babac dhigtay xiddigaha ama weeraryahanada ugu khatarsan yurub xilli ciyaareedkan ee MSN oo ay waliba lama heli kar ka dhigtay fursadna u sii weyday in ay hal mar shabaqooda soo taabtaan.
Kooxda Monaco ayaa leh weerar halis ah oo aan goolka laga ilaashan karin taas oo ay muujisay kulamadii kooxaha Man City Iyo Walba Borussia Dortmund.
Laakiin Dhibaatada ay kooxda Wajihi doonto ayaa ah mid la mid ah tiis Barcelona waxana kooxda Monaco ku adkaan doonta in ay si dhib yar ku gaarto goolka Buffon maadama ay ku dhibaatoodeen Xiddigaha MSN.
Marka laga yimaado in kooxda Juventus ku caan baxday daafac bir ah waxa ay sidoo kale leedahay weerar balaayo ah oo aan hal fursad oo kaa khaldantay dhaafayn iyaga oo ku caan baxay in ay garbaha uga ciyaaraan xiddigo orod badan oo aadna si dhib yar ku qaban karin.
Muhiimaa Juventus ayaa ah in ay iyadu si dhib yar u dhalin karto goolal maadama ayna kooxda Monaco lahayn daafac sida juventus u adag.
Hadaba Kooxda.com ayaa saadaalinaysa in ay Finalka isugu Iman Doonaan Kooxaha Juventus Iyo Real Madrid Kuwaas oo calaf kooda ku kala qaadi doona finalka champions league.
Fikirkaaga waad ka dhiiban kartaa labada kooxood ee aad Finalka u saadaaliso fadaln cadaynta aad ugu dooratay Raaci?
Filed in: Champions League, France, Italy, Spain, Wararka Maanta, Warbixino
4 Fikrad Ayaa Laga Bixiyay Warkaan “Falanqayn: Yaa Awood U Leh In Uu Iska Xaadiriyo Finalka Ka Dhici Doona Cardiff Real Madrid Vs Atletico Madrid, Juventus Vs Monaco”
cabdisalaan daraabuliz April 23, 2017 at 5:00 pm · Edit
abdimajid mohamed bare April 22, 2017 at 4:10 pm · Edit
maxaa yeelay real weerar ilaa difaac way isku xiran yihiin
ilaa dadkii bayan kala dhantaalay
wax celinayo malahan marka waad fagmi kartaa real
juv aan usoo laabto difaac ilaa dhax ilaa istareekar way kadhisanta dhanka garbaha ayaad umaleysaa in ay kayara jilicsanta
marka difaaceeda birta ah ayaa wax waliba hakinaayo marka juv way soobixi kartaaa
abdimajid mohamed bare April 22, 2017 at 4:03 pm · Edit
real Madrid way soobaxeysa 1
juventus way soobaxeysaa 2
finalka ayeey isku arkaan markaa
rea vs juv kadib barca waa loo aar gudaaa
cr9 April 22, 2017 at 3:32 pm · Edit
monoco sv real madrid real wexy gurigooda ku badineysaaa 3:0 cr7 ayaa dhalinaaya kn kalena 1:0 real ayaa badineysa cr7 ku qor magiciisa golashaas halka monoco ay ku dubayneyso 1:0 gurigeeda hlka juve stadium ay ku dhamaaneyso 0:0 golkaasna ku qor xidiga reer frence kalian mpabe